Maxaa ka soo kordhay Magaalada Dhuusamareeb oo aadan ogeyn?. – XAMAR POST
Maxaa ka soo kordhay Magaalada Dhuusamareeb oo aadan ogeyn?.
By Zakariye iiman On Jun 22, 2019
Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug waxaa xalay ku soo idlaaye,kulan natiijada lagu balansanaa aanan ku soo idlaan,Madaxweyne Xaafna uu iiday dalab uga yimid Hoggaanka Sare ee Ahlu-Sunna oo garabka Xaaf ka baxay iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo fariin ka siday Madaxda Dalka ayaa shalay Dhuusamareeb u tagay,sidii Madaxweyne loogu qancin lahaa in doorasho bishan soo socota la qabto,Madaxweyne Xaafna uu isaga haro sida la sheegayna lacag uu qaato.
Dhammaan qodobadaas loo soo bandhigay Madaxweyne Xaaf waa uu diiday,xalay ilaa waqti dambe ayaa laisla gaaray.
Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir oo hore ku garab ahaa Madaxweyne Xaaf ayaa dhanka Guddomiyaha Culumadda Ahlu-Sunna Macalin Max’uud xalay kasoo jeestay,iyadoo saaka Sheekadu tahay Dowlada+Ahlu-Sunn iyo Xaaf oo kaligiis ah.
Gadiid dagaal ayaa wararku waxaa ay sheegayaan in ay kasoo ambabaxeen Magaalada Cadaado kuwaasi oo tiro ahaan gaaraya 12 gaadiid sida Madaxweyne Xaaf dib loogu celin lahaa Madaxtooyadii Cadaado ee Maamulku uu ku shaqeyn jiray inta aany ku biirin Ururkii Ahlu-Sunna.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad iyo Sanator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa dhankooda kawasa Gaalkacyo kulamo siyaasadeed,iyagoona sheegay in Galmudug uu Madaxweyne u yahay Xaaf,Caburina aysan aqbali-doonin.
Dowladda soomaaliya oo guryihii ay dagnayeen ka saartay Qoyska wariyaal Qaranka u dhintay
Ciidamo kuwii ugu badnaa oo ku wajahan magaaladda dhuusamareeb iyo xalada ca kiran oo ay Galmudug gashay